The new uchungechunge ihluzo ikhadi NVIDIA GeForce no-700m
Five entsha uchungechunge isiqophi ikhadi GeForce no-700m - GeForce GT 750M, 745M, 740M, 735M futhi 720M & ndash; Samukele ukusekelwa sezisebenzisa itheknoloji etja GPU Boost 2.0, okuyinto ngokukhalipha ulungisa ifrikhwensi GPU wandise ihluzo ukusebenza.
Godu, ikhadi ividiyo ithole NVIDIA Optimus ubuchwepheshe, okuyinto ngcono isikhathi yokusebenza laptop yebhethri sizibulale on and off the ihluzo ngokuqhubekayo njengoba kudingeka.
i-Kepler bokwakha, okuyinto inhliziyo amabalazwe amasha ngokokuqala ngqa asetshenziswe lonke uhla Nvidia mobile. Iningi ezandulele 600M uchungechunge amakhadi esekelwe Fermi bokwakha.
Ku ngokwemigomo ukusebenza, ngokusho Nvidia sika, kwi medium imininingwane umugqa unikeza kuze 90fps e "StarCraft II", 65fps ngo "Umdala Imiqulu V:Skyrim", 66fps ngo "Batman:Arkham City" futhi 48fps e "Battlefield 3" . Kunalokho, kuba ukusebenza kwe-GeForce ikhadi GT 750M. Nvidia akashongo ngokuqondile
- Nokho, leli zwi lesinqumo kwalezi imiphumela eyatholakala.
Indlela entsha yokuthuthukisa GeForce no-700m amakhadi etholakalayo prozhadi e laptops wanamuhla. Ngo-January, mina kukukhumbuza, GeForce no-700m ikhadi Nvidia sika sikhishwa futhi GeForce GT 730M.
Ngicela uvule ikhasi in isiphi isiphequluli?
Yini amasevisi uxhume kwi-MTS
Njengoba ukuthuthela Windows Vista
Inkinga nge ikhadi lomsindo